dowladda Soomaaliya oo markale soo saartay Go’aan lala yaabay! – Hornafrik Media Network
By Liibaan Nuur	 On Oct 15, 2018
HornAfrik-Dowladda Soomaaliya ayaa garab istaaggeeda dhammeystiran u muujisay dowladda Boqortooyada Sacuudi Carabiya.War saxaafadeed afka Carabiga ku qornaa oo ay baahisay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lugu xaqiijiyay taageerrada.
“Xukuumadda Soomaaliya waxaa ay markale ku celinaysaa mowqifkeeda sugan ee taageeraya degganaanshaha iyo qarannimada dalalka Carabta, waxayna ku dhawaaqeysaa garab istaaggeeda dhammeystiran ee dowladda Boqortooyada Sacuudi Carabiya ee aanu walaalaha nahay, kana soo horjeedno cid kasta oo isku dayeysa inay dhib gaarsiiso ama wax u dhinto kaalinteeda iyo danaheeda dhaqaale.
Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay adkeyneysaa laga maarmaanshaha in laga fogaado dhagar iyo olole ujeeddooyin kale leh oo lagu hagardaamaynayo Boqor-tooyada Sucuudi Carabiya.” ayaa lagu yiri War-saxaafadeedka.
halkaan ka arag warqadda ay dowladdu soo saartay.
Mas’uul maanta lagu xayiray Garoonka Diyaaradaha ee Muqdisho.